Feice Explosion-proof Electric Co., Ltd ၏ ဥက္ကဋ္ဌ၊
နှစ်ပေါင်းများစွာ ခက်ခဲကြမ်းတမ်းသော ရှေ့ဆောင်ကြိုးပမ်းမှုများသည် Fice ၏ နက်နဲသော အခြေခံအုတ်မြစ်နှင့် ကြွယ်ဝသော ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်များကို တည်ဆောက်ခဲ့ပြီး၊ Fice သည် ပြိုင်ပွဲမှ ထင်ရှားပေါ်လွင်စေသည်။ဤနေရာတွင်၊ Feicer ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို ဂရုပြုပြီး ပံ့ပိုးပေးသော ဖောက်သည်များ၊ ဒီဇိုင်းအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပါတနာများကို အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။
ထူးချွန်မှုကိုလိုက်စားခြင်းသည် ပေါက်ကွဲဒဏ်ခံလျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်ခြင်းနယ်ပယ်တွင် Feice ၏ထူးခြားသောအတွေ့အကြုံဖြစ်သည်။ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ စွန့်ဦးတီထွင်မှုဆန္ဒများကို အမွေဆက်ခံပြီး ရာစု၏ ဂုဏ်ကျက်သရေကို ရေးချပါမည်။
Feice Explosion-proof Electric Co., Ltd. သည် "တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ၏မွေးရပ်မြေ"၊ Jiaxing၊ Zhejiang တွင် တည်ရှိသည်။၎င်းသည် အရည်အသွေးမြင့် "Class II" စက်ရုံတွင် အသုံးပြုသည့် ပေါက်ကွဲဒဏ်ခံလျှပ်စစ်ပစ္စည်းများနှင့် မီးအလင်းရောင်ဆိုင်ရာပစ္စည်းများကို ထုတ်လုပ်ရာတွင် အထူးပြုထုတ်လုပ်သူနှင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးသူဖြစ်သည်။ကုန်ပစ္စည်းများကို ရေနံ၊ ဓာတု၊ သဘာဝဓာတ်ငွေ့၊ ကမ်းလွန်ပလပ်ဖောင်းများ၊ စစ်ရေး၊ မီးရထား၊ ဆိပ်ကမ်းများနှင့် အခြားနယ်ပယ်များတွင် တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုခဲ့ပြီး စက်မှုလုပ်ငန်းတွင် နှစ်ပေါင်းများစွာ ထိပ်တန်းသုံးစာရင်းတွင် ပါဝင်ခဲ့သည်။
ကုမ္ပဏီကို 1995 ခုနှစ်တွင် မှတ်ပုံတင်ထားသော အရင်းအနှီး ယွမ် 301.66 သန်းဖြင့် တည်ထောင်ခဲ့ပြီး 2010 ခုနှစ်တွင် Wenzhou မှ Nanhu District, Jiaxing City, Zhejiang Province သို့ ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ ၎င်းတွင် 100,000 စတုရန်းမီတာနီးပါးရှိသော ခေတ်မီစက်ရုံအဆောက်အဦးတစ်ခု ရှိပြီး ဝန်ထမ်း 500 ကျော် အပါအဝင်၊ နည်းပညာရှင် 90 နှင့် နှစ်စဉ် ယွမ် သန်း 500 ကျော် ရောင်းချခဲ့သည်။
ကုမ္ပဏီသည် IS09001 အရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်၊ ISO14001 ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်၊ ISO10012 တိုင်းတာမှုစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်နှင့် OHSAS18001 လုပ်ငန်းခွင်ကျန်းမာရေးနှင့် ဘေးကင်းရေးစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်တို့ကို ကျော်ဖြတ်ပြီးဖြစ်သည်။တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ ကုမ္ပဏီသည် ကမ္ဘာနှင့် အပြည့်အဝ ပေါင်းစပ်ထားပြီး ဥရောပသမဂ္ဂ ATEX၊ နိုင်ငံတကာ IECEx၊ ရုရှား CU TR နှင့် အခြား နိုင်ငံတကာ အသိအမှတ်ပြု လက်မှတ်များကို ဆက်တိုက် ရရှိခဲ့သည်။၎င်းသည် China Explosion-proof Electrical Equipment Association ၏ ဒုတိယဥက္ကဌ ယူနစ်နှင့် National Standardization Technical Committee of Explosion-proof Electrical Equipment ၏ အဖွဲ့ဝင် ယူနစ်ဖြစ်သည်။
စတင်တည်ထောင်ချိန်မှစ၍ ကုမ္ပဏီသည် နိုင်ငံအလိုက် တီထွင်မှုမူပိုင်ခွင့်နှင့် အသုံးဝင်မှုပုံစံ မူပိုင်ခွင့်လက်မှတ် 100 နီးပါးရရှိထားသော ထုတ်ကုန်များနှင့် နည်းပညာများစွာရှိပြီး အမျိုးသားအဆင့်နှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ စံချိန်စံညွှန်းပေါင်း 20 ကျော်ကို ရေးဆွဲရာတွင် ပါဝင်ခဲ့ပြီး အမျိုးသားအဆင့် နည်းပညာမြင့်လုပ်ငန်းတစ်ခုအဖြစ် ချီးမြှင့်ခံခဲ့ရသည်။ " 2014 ခုနှစ်တွင်၊ 2000 ခုနှစ်မှစ၍၊ ၎င်းသည် Sinopec၊ PetroChina နှင့် CNOOC တို့၏ရေရှည်အရည်အသွေးမြင့်ပေးသွင်းသူဖြစ်ပြီး၊ China Jiuquan Satellite Launch Center၊ China Xichang ဂြိုလ်တုအတွက် ပေါက်ကွဲမှုဒဏ်ခံလျှပ်စစ်ပစ္စည်းများကို ပေးအပ်သူအဖြစ် ဂုဏ်ပြုခံရပါသည်။ ဒုံးပျံလွှတ်တင်ရေးစင်တာ နှင့် China Wenchang ဂြိုလ်တုလွှတ်တင်ရေးစင်တာ။
စက်မှုလုပ်ငန်းတွင် လူသိများသော အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုကို တည်ဆောက်ရန် စဉ်ဆက်မပြတ် တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင် ကြိုးစားပါ။
အောင်မြင်မှုဆိုတာ သဘောတရားကနေ ဖြစ်ပေါ်လာတာပါ။Feace ၏ စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့သည် "ပေါက်ကွဲဒဏ်ခံနိုင်သော လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ၏ အမြင့်ဆုံးအရည်အသွေးနှင့် အမြင့်ဆုံးဘေးကင်းမှုကို လိုက်စားသည့် အမျိုးသားစက်မှုလုပ်ငန်းကို ပြန်လည်အသက်ဝင်လာစေသည့် စီးပွားရေးအတွေးအခေါ်ကို လိုက်နာပါသည်။"ရာစုနှစ်တစ်ခုရှိ သက်တမ်းရှိ လုပ်ငန်းကြီး၏ အသေးစိတ်ပုံစံသည် "လူမှုရေးဆန်မှု၊ သိပ္ပံနည်းကျ စီမံခန့်ခွဲမှု၊ စက်မှုလုပ်ငန်း ကွဲပြားမှု၊ စီမံခန့်ခွဲမှု၏ ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်း၊ နှင့် အမှတ်တံဆိပ်များ နိုင်ငံတကာသို့ ကူးပြောင်းခြင်း" တို့၏ ကြီးကျယ်ခမ်းနားသော အသေးစိတ်ပုံစံသည် ရှေ့သို့ ကြိုးပမ်းလျက်ရှိသည်။
"ပေါက်ကွဲဒဏ်ခံလျှပ်စစ်ပစ္စည်း ၃၀၀၀၀၀ နှင့် ပေါက်ကွဲဒဏ်ခံမီးလုံးများ နှစ်စဉ်ထွက်ရှိမည့် Smart Factory တစ်ခုတည်ဆောက်ခြင်း" အကောင်အထည်ဖော်ရန်အတွက် မြေ ၃၈ ဧကကို ပေါင်းထည့်ရန် ယွမ် ၁၃၆ သန်း ရင်းနှီးမြုပ်နှံထားသည်။အလွန်လိုက်လျောညီထွေရှိသော၊ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆန်သော၊ နှင့် သတင်းအချက်အလတ်အခြေခံသော အသိဉာဏ်ရှိသော ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်စနစ်တစ်ခုကို ဖန်တီးပါ။ပရောဂျက်သည် ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်သော ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းကို အာရုံစိုက်ပြီး Industry 4.0 ကို နားလည်သဘောပေါက်သည့် နိုင်ငံတွင်း "Made in China 2025" စက်မှုပံ့ပိုးမှုမူဝါဒနှင့်အညီ စီမံကိန်းဖြစ်သည်။
ဒေသန္တရအစိုးရ၏ အစုရှယ်ယာပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များကို တုံ့ပြန်သည့်အနေဖြင့် ကုမ္ပဏီ၏အမည်ကို "Feice Explosion-proof Electric Co., Ltd." သို့ တရားဝင်ပြောင်းလဲခဲ့သည်။
ပေါက်ကွဲဒဏ်ခံနိုင်သော လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများနှင့် အလင်းရောင် ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်သော ပြုပြင်ခြင်းနှင့် တပ်ဆင်ခြင်း အလုပ်ရုံ 17,235.69 စတုရန်းမီတာရှိသော ဆောက်လုပ်ရေး ဧရိယာအသစ်အား ယွမ်ငွေ သန်း 20 ဖြင့် စတင်အသုံးပြုခဲ့ပါသည်။ကုမ္ပဏီ၏ စက်ရုံအဆောက်အအုံများ၏ စုစုပေါင်းတည်ဆောက်မှု ဧရိယာသည် ၆၃,၆၀၄.၂၆ စတုရန်းမီတာအထိ ရှိသည်။ယခုနှစ်တွင် ကုမ္ပဏီသည် Zhejiang အဆင့် အဆင့်မြင့်နည်းပညာ သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်လည်း လျှောက်ထားခဲ့သည်။ဗဟိုက အသိအမှတ်ပြုပြီး အတည်ပြုခဲ့တယ်။
မှတ်ပုံတင်ထားသော မတည်ငွေရင်းသည် ယွမ်ငွေ သန်း 400 ကျော်၊ ပုံသေပိုင်ဆိုင်မှု ယွမ်သန်း 320 သို့ တိုးလာပြီး ထုတ်ကုန်တန်ဖိုးသည် ယွမ်သန်း 400 ကျော်လွန်သွားသည်။
Feice သည် "Nanhu District Patent Demonstration Enterprise"၊ "Ten Ten R&D Enterprises in Urban Area" နှင့် "AAA Credit Rating Certificate of China Electrical Appliance Industry" ကဲ့သို့သော ဂုဏ်ထူးဆောင်ဆုများ ရရှိခဲ့ပါသည်။ထိုနှစ်အတွင်းတွင်၊ ပေါက်ကွဲဒဏ်ခံလျှပ်စစ်ပစ္စည်းများကိုအသုံးပြုထားသော စစ်ဘက်လုပ်ငန်းခွင်များ၏ အရည်အသွေးစံနစ်လိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီစေရန် ကုမ္ပဏီသည် GJB-9001 အမျိုးသားအဆင့် စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ စံအရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ကို အောင်မြင်ခဲ့သည်။
ကုမ္ပဏီသည် ထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ရာ အလိုအလျောက်စနစ်အဆင့်ကို မြှင့်တင်ရန်နှင့် စမတ်စက်ရုံဆီသို့ ရွေ့လျားရန် ရေရှည်ရည်မှန်းချက်တွင် ၎င်း၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပန်းတိုင်ကို ချမှတ်ထားသည်။၎င်းသည် ပေါက်ကွဲမှုဒဏ်ခံလျှပ်စစ်ပစ္စည်းများထုတ်လုပ်ခြင်းအတွက် ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်သောနည်းပညာအသွင်ကူးပြောင်းရေးပရောဂျက်ကို ဆက်လက်အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့ပြီး German TRUMPF လေဆာဖြတ်တောက်ခြင်းစင်တာ၊ CNC တူးဖော်ခြင်းနှင့် ခြစ်ရာဌာန၊ နှင့် အလိုအလျောက်သယ်ဆောင်သည့် လျှပ်စစ်ဓာတ်ဖြန်းခြင်းတို့ကို မိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်။ပလပ်စတစ်အကာအရံတပ်ဆင်ခြင်းလိုင်း၊ အစိတ်အပိုင်းနှစ်ခုပါသော အလုံပိတ်အကန့်များအတွက် အဆက်မပြတ်ထုတ်လုပ်သည့် ကိရိယာများ စသည်တို့သည် လုပ်ငန်း၏ ထုတ်လုပ်မှုစက်ကိရိယာအဆင့်ကို ပိုမိုမြင့်မားသောအဆင့်သို့ မြှင့်တင်ပေးခဲ့ပါသည်။
Feice အား နိုင်ငံတော်အဆင့် နည်းပညာမြင့်လုပ်ငန်းတစ်ခုနှင့် Zhejiang သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာလုပ်ငန်းတစ်ခုအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုခံရပြီး လုပ်ငန်းနည်းပညာစင်တာကို မြူနီစီပယ်အဆင့်မြင့်နည်းပညာသုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစင်တာတစ်ခုအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုခံရကာ အလားတူ "Zhejiang Famous Trademark" ကိုလည်း ချီးမြှင့်ခံခဲ့ရသည်။ တစ်နှစ်;
ဒေသန္တရအစိုးရ၏ စက်အစားထိုးမူဝါဒဖြင့် မှုတ်သွင်းထားသော ထုတ်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏ အလိုအလျောက်စနစ်အဆင့်ကို မြှင့်တင်ရန်အတွက် ကုမ္ပဏီသည် ပထမအသုတ်တွင် စက်ပစ္စည်းများ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု ယွမ် ၈ သန်းဖြင့် စက်အစားထိုးနည်းပညာ အသွင်ကူးပြောင်းရေး ပရောဂျက်ကို အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့ပြီး နောက်နှစ်တွင် ဆက်တိုက်ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ ထုတ်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည် မြင့်တက်လာခြင်း၊ ထုတ်ကုန်အရည်အသွေး တိုးတက်ကောင်းမွန်လာပြီး လုပ်ငန်းများသည် ပထမဦးဆုံးအကြိမ် အလိုအလျောက် စက်ကိရိယာများ ထုတ်လုပ်ခြင်းဖြင့် ရရှိလာသော ချိုမြိန်မှုကို မြည်းစမ်းခဲ့ကြပါသည်။
တရုတ်နိုင်ငံ၏ ပေါက်ကွဲဒဏ်ခံလျှပ်စစ်စက်ပစ္စည်းစက်မှုလုပ်ငန်းတွင် ထိပ်တန်းထိပ်တန်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆယ်ခုနှင့် တရုတ်နိုင်ငံ၏ ပေါက်ကွဲဒဏ်ခံလျှပ်စစ်ပစ္စည်းစက်မှုလုပ်ငန်းတွင် ထိပ်တန်းရိုးသားသောလုပ်ငန်းဆယ်ခုတို့ကို ရရှိခဲ့သည်။
ဧက 80 ကျယ်ဝန်းသော Jiaxing Modern Industrial Park ကို တရားဝင် စတင်အသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်သည်။၎င်းတွင် အသေပုံသွင်းခြင်း၊ ဂဟေဆော်ခြင်း၊ ဆေးထိုးခြင်း၊ ဖိသိပ်ခြင်းများ၊ သတ္တုလုပ်ငန်း၊ မှုတ်ပုံသွင်းခြင်း၊ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများနှင့် မီးချောင်းများအပြင် မှိုအလုပ်ရုံနှင့် အဆင့်မြင့် ပေါက်ကွဲမှုဒဏ်ခံ လျှပ်စစ်စမ်းသပ်ရေးဌာနတို့ အပါအဝင် အလုပ်ရုံ ရှစ်ခုရှိသည်။အကြီးစားထုတ်လုပ်မှုပုံစံများ စီးရီးများ။
ကုမ္ပဏီ၏ မှတ်ပုံတင်ထားသော မတည်ရင်းနှီးငွေသည် ယွမ် ၇၁.၆၆ သန်းအထိ တိုးလာပြီး ပုံသေပိုင်ဆိုင်မှု ယွမ်သန်း ၂၈၀ သို့ ရောက်ရှိကာ ထုတ်ကုန်တန်ဖိုးသည် ယွမ်သန်း ၂၂၀ ကျော်လွန်သွားခဲ့သည်။
ဥက္ကဋ္ဌ Xu Yuedi အား ပေါက်ကွဲဒဏ်ခံလျှပ်စစ်ပစ္စည်းဆိုင်ရာ အမျိုးသား စံချိန်စံညွှန်းသတ်မှတ်ရေး ကော်မတီ (SAC/TC9) ၏ အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ခန့်အပ်ခံခဲ့ရသည်။
ကုမ္ပဏီအား Shenzhou-7 လူလိုက်ပါသည့် အာကာသယာဉ်ကို ချောမွေ့စွာ လွှတ်တင်ရန်အတွက် အရည်အသွေးမြင့် ပေါက်ကွဲဒဏ်ခံ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများကို ပံ့ပိုးပေးသည့် ပေါက်ကွဲမှုဒဏ်ခံ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများကို ဖြန့်ဖြူးရောင်းချသူအဖြစ် China Jiuquan ဂြိုလ်တုလွှတ်တင်ရေးစင်တာမှ တာဝန်ပေးအပ်ခဲ့သည်။
ထုတ်လုပ်မှုနှင့် ရောင်းချမှုတန်ဖိုးနှစ်ခုစလုံးသည် ယွမ်သန်း ၁၅၀ ကျော်လွန်သွားပြီး၊ တရုတ်လျှပ်စစ်ပစ္စည်းစက်မှုလုပ်ငန်းအသင်းမှ ထိပ်တန်းနိုင်ငံတော် ပေါက်ကွဲမှုဒဏ်ခံ လျှပ်စစ်လုပ်ငန်း ၁၀ ခုထဲမှ တစ်ခုအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုခံခဲ့ရသည်။
ကုမ္ပဏီသည် Yueqing City ရှိ Beibaixiang New Industrial Production Park တွင် ဧက 30 ကျော်ကို လွှမ်းခြုံထားပြီး၊
အမျိုးသား အရည်အသွေးနှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာ ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲမှုဗျူရိုမှ ဥက္ကဋ္ဌ Xu Yuedi အား "အမျိုးသားပေါက်ကွဲဒဏ်ခံလျှပ်စစ်ပစ္စည်း စံချိန်စံညွှန်းသတ်မှတ်ရေးဆိုင်ရာ နည်းပညာကော်မတီ၏ ပေါက်ကွဲမှုဒဏ်ခံ လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ ဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်" အဖြစ် ခန့်အပ်ခဲ့သည်။
ISO9001 အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အရည်အသွေးစနစ် အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ကို ရရှိခဲ့သည်။ထိုနှစ် အောက်တိုဘာလတွင် ကုမ္ပဏီအား China Petroleum Materials and Equipment (Group) Corporation မှ "ပထမအဆင့် ပေးသွင်းသူ" အဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့သည်။
Yueqing နည်းပညာဆိုင်ရာ ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲမှုဗျူရို၏ ပံ့ပိုးကူညီမှုဖြင့် Yueqing၊ Wenzhou ရှိ ပေါက်ကွဲမှုဒဏ်ခံစက်မှုလုပ်ငန်းစံနှုန်းများကို မြှင့်တင်ရန်အတွက် ကုမ္ပဏီဥက္ကဋ္ဌ Xu Yuedi မှ စီစဉ်သူတဦးအနေဖြင့် Yueqing ပေါက်ကွဲမှု-သက်သေစက်မှုအသင်းအား ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ (လက်ရှိအမည်: Zhejiang Explosion-Proof Electrical Industry) Association) မှ ဒုဥက္ကဌအဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
ကုမ္ပဏီသည် China Electrical Equipment Industry Association of Explosion-proof Electrical Appliances Branch တွင် ပါဝင်ခဲ့ပြီး ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ရွေးချယ်ခံခဲ့ရသည်။ဥက္ကဋ္ဌ Xu Yuedi သည် ဒါရိုက်တာ၊ ရပ်တည်နေသော ဒါရိုက်တာနှင့် ဒုဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ဆင့်ကဲဆင့်ကဲ ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
ကုမ္ပဏီ၏စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်သည် ISO9001၊ European Explosion-proof Safety Certification System (ATEX) နှင့် ISO14001 Environmental Management System၊ OHSAS18001 လုပ်ငန်းခွင်ကျန်းမာရေးနှင့် ဘေးကင်းရေးစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်၊ China Petrochemical Corporation နှင့် China National Petroleum Corporation (HSE) ကျန်းမာရေး၊ ဘေးကင်းရေးနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီပါသည်။ စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်လိုအပ်ချက်များ။
နည်းပညာမြင့် လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ လက်မှတ်
ပေါက်ကွဲဒဏ်ခံပစ္စည်းကိရိယာများ တပ်ဆင်ခြင်း၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် ပြုပြင်ခြင်းအတွက် အရည်အချင်းလက်မှတ်
ဥရောပသမဂ္ဂ ATEX အရည်အသွေးစနစ် အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်
1. Sinopec Zhongke Guangdong သန့်စင်ရေးနှင့် ဓာတုဗေဒပေါင်းစပ်မှု ပရောဂျက် 2. Sinopec Gulei သန့်စင်ရေးနှင့် ဓာတုဗေဒပေါင်းစပ်မှု ပရောဂျက်
3. Zhejiang Petrochemical ၏ တစ်နှစ်လျှင် တန်ချိန် ၄၀ သန်း သန့်စင်ရေးနှင့် ဓာတုဗေဒပေါင်းစပ်မှု စီမံကိန်း 4. Hengli တစ်နှစ်လျှင် တန်ချိန် သန်း 20 သန့်စင်ပြီး ဓာတုဗေဒပေါင်းစပ်မှုစီမံကိန်း
5. PetroChina Jieyang ဗဟိုကော်မတီ Guangdong Petrochemical တန်ချိန် သန်း 20 သန့်စင်ရေးနှင့် ဓာတုဗေဒပေါင်းစပ်မှုစီမံကိန်း၊ 6. Hengyi Brunei Damora ကျွန်း (PMB) ရေနံဓာတုစီမံကိန်း
7. Sino-Russian Amur Natural Gas Chemical Complex Project (AGCC) 8. Shaanxi Coal Group Yulin Chemical Co., Ltd ၏ သရုပ်ပြစီမံကိန်း၊
9. Shenghong Group Jiangsu Lianyungang သည် တစ်နှစ်လျှင် တန်ချိန် 16 သန်း သန့်စင်ရေးနှင့် ဓာတုဗေဒပေါင်းစပ်မှုစီမံကိန်း၊ 10. Long March4ပစ်လွှတ်ခြင်းမစ်ရှင်